David De Gea Oo Iska Diiday Dalabkii Ugu Dambeeyay Ee Ay Man United U Soo Bandhigtay Sii Uu Heshiis Cusub Ugu Saxiixo Kooxda – Wararka Ciyaaraha Maanta
May 22, 2019 kooxda Premier League, Wararka Maanta 0
Goolhayaha Kooxda Man United ee David De Gea ayaa iska diiday dalabkii ugu dambeeyay ee ay kooxda Man United u soo bandhigtay si uu heshiis cusub ugu saxiixo kooxda.
Goolhayaha reer Spain ayaa si cad u sheegay in uuna heshiis cusub u saxiixi doonin kooxda wixii ka dambeeya xilli ciyaareedka dambe taas oo maamulka Man United ku riixaysa in ay iibiyaan suuqa xagaagan.
Kooxda Man United ayaa ku fashilantay in ay la kulanto qiimaha De Gea ee suuqa ee dhan 350 kun oo Gini todobaadkii ee ay kooxda PSG diyaarka ula tahay.
PSG ayaa qorshaynaysa in ay dalab 60 milyan oo euro ah ka gudbiso inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan ama laga yaabo in ay si xor ah ku hesho xiddiga xagaaga dambe.
Go,aanka uu De Gea ku diiday heshiiska cusub ayaa dhirbaaxo weyn ku ah tababare Ole Gunnar Solskjaer kaas oo dib u dhis weyn ku samaynaya kooxda Man United xagaagan.
Goolhayaha reer Spain ayaa 4 jeer ku guulaystay xiddiga ugu fiican kooxda 6-dii sano ee ugu damabaysay laakiin waxa hoos u dhacay qaab ciyaareedkiisa sabab la xidhiidha shakiga ku jira mustaqbalkiisa.
Kooxda Man United ayaa Goolhayaha U Qabatay wakhti uu go,aan kaga gaadho mustaqbalkiisa ka hor dhamaadka xilli ciyaareedkan waxana ay u muuqataa in uu go,aansaday in uu doonayo in uu isaga tago kooxda haatan ama 12 bilood kadib.